Multimedia – Bogga 5 – Windows – Vessoft
Maamulaha iPhone-ka ee loo yaqaan ’DearMob iPhone – software ayaa loogu talagalay inuu ku wareejiyo muusikada, feylasha fiidiyoowga ah iyo sawirrada laga soo qaado iPhone kombiyuutarka, maareynayo codsiyada iyo xogta gurmad ah.
CamStudio – waa barnaamij lagu duubo ficillada shaashadda kumbuyuutarka si faylasha fiidiyoowga loogu duubo. Sidoo kale, softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu duubo maqalka si loo abuuro bandhigyo tayo leh.
JetAudio – ciyaartoy warbaahin shaqeynaya oo taageeraya aalado lagu farsameeyo feylasha maqalka iyo fiidiyowga ah. Softiweerku wuxuu ka koobanyahay isbarbardhigga kumbuyuutarka si loogu habeeyo dib u soo kabashada tayada faylasha warbaahinta.
Software waafajinta xogta u dhexeeya computer iyo qalab Windows Phone ah. Software ayaa awood u si loo casriyeeyo nidaamka qalliinka ee qalabka iyo xakameeyo playlists ee maktabadda warbaahinta.
Imagen – ciyaaryahan warbaahin oo leh taageero maqal iyo muuqaal ah oo caan ah. Software-ka ayaa awood u siinaya inuu daawado macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan faylasha oo uu sameeyo shaashadda.
i-FunBox – aalad lagu arko waxyaabaha ka kooban aaladda Apple. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad gasho nidaamka faylka ee aaladda iyo inaad maamusho codsiyada.
MP4 Beddelka – удобный в использовании конвертер файлов для бреобразояания видео в различные медиа форматы. Ограмма поддерживает работу с большинством популярных медиа форматов и пакетную обработку файлов.
Si sahlan ay u isticmaalaan Converter faylasha warbaahinta oo kala duwan. Software wuxuu taageeraa qaabeynta fursado kala duwan oo ku daray waxyeellooyinka qaarkood inta lagu jiro qaab beddelidda.
KaraFun Player – waa ciyaar dib u soo celiya heesaha karaoke ee noocyada kala duwan. Softiweerku wuxuu awoodaa inuu hagaajiyo dhawaaqa, waqtiga, codka iyo maqaalada kale ee muusikada.
Kani waa software si uu u duubo fiidiyooga shaashadda kombiyuutarka isla markaana si joogta ah uga faalloodi kara ficilada inta lagu jiro qoraalka sababtoo ah websaydhka ama mikrofoon ku xiran.